‘भद्रगोल’ टिमले माग्यो दर्शकसंग सुझाव : यो अवस्थामा हामी के गरौं ? - Sidha News
काठमाडौं। लोकप्रिय हाँस्य सिरियल ‘भद्रगोल’को अहिले प्रशारण रोकिएको छ। नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु भएसँगै साउनदेखि ‘भद्रगोल’को प्रशारण रोकिएको हो।
अहिले मात्र होइन् विगतमा पनि बेलाबेलामा सिरियलको नियमित प्रशारण रोकिँदै आएको थियो। यसपटक भने लामो समय सिरियल रोकियो।
आखिर किन रोकियो ‘भद्रगोल’? अब कहिलेबाट आउँछ ?दर्शकमा चासो छ।
कहिलेबाट आउँछ रोकिएको ‘भद्रगोल’ ?